Iyo yazvino beta yeApple Music ye Android inoburitsa remangwana Apple Classical | Nhau dze iPhone
Takatokuudza kakawanda kuti digital services Vauya kuzotora nzvimbo yakakosha kwazvo mumari yevakomana kubva kuCupertino. Sevhisi kubva kuICloud chengetedzo kuenda kukushambadzira zvemukati masevhisi seApple Music kana Apple TV+. Mukupedzisira, kunyoreswa kunochengetedza mari yakatendeka yekambani uye zvinoita sekunge vari kuda kuenderera mberi nekuiwedzera. Zvitsva: Apple yaizofunga kuvhura Apple Classical, sevhisi nyowani yekutepfenyura mimhanzi.
Chokwadi ndechekuti chave chikatyamadzo, mune yazvino beta vhezheni yeApple Music yeApple a mutsara wekodhi Ndizvo zvinotaura Vhura muApple Classical, mutsara unoratidza mukana weiyo nyowani Apple sevhisi yakatsaurirwa kumimhanzi yemhando yepamusoro iyo inogona kuuya mune yakaparadzana app, ndosaka Vhura mu... Uye chokwadi ndechokuti Kwenguva refu kwave kutaurwa nezve mukana wekuti Apple ingangotanga sevhisi yerudzi urwu, mukupedzisira ivo vari kuyedza kubheja pakugutsa vanonyanya kunzwika uye vakagara vachiedza kutarisira Apple Music's catalog yemimhanzi yemhando yepamusoro. Uye rangarira kuti gore rakapera Apple yakatenga Primephonic, iyo classical mimhanzi yekufambisa sevhisi.
Tichaona kuti zvese izvi chii, sezvatinotaura Tichafanira kumirira mwedzi mishoma sezvo inogona kunge iri inotevera Keynote ye WWDC iye akasarudzwa kuratidza nhau muApple Music nezve iyi nyowani mimhanzi sevhisi. Sevhisi inogona kunge iri yakabatanidzwa muApple Music pachayo mukutsinhana nekubhadhara imwe uye izvo zvinogona kuuya pamwe nekuvandudzwa kweHomePod renji kuti tigone kunakidzwa nemimhanzi mukunaka kwayo kwese. Uye newe, Ungave unofarira Apple Classical?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Iyo yazvino beta yeApple Music yeApple inoburitsa remangwana Apple Classical
Tweetbot inotora huwandu hwematweets mune yayo nyowani yekuvandudza